Khabar Kantipur » यी हुन् फिटकिरीको २० फाइदाहरु यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ
यी हुन् फिटकिरीको २० फाइदाहरु यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ
१. चोट लाग्दा फिडकीरी
यदि तपाईलाई कुनै चोट लाग्यो वा घाउ भयो भने उसमा लगातार रगत आयो भने फिटकरीको पानी वाट घाउको धुन सकिन्छ । यसले रगत बग्न बन्द हुन्छ । फिटकिरी पानीको ठाउमा तपाई फिटकरीको महीन पिसेर पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
२. पसिनाको गन्द हटाउन
यदि तपाईको धेरै पसिना आउछ भने वा पसिना गनँउछ भने पनि फिटकरीको लगाउनाले तपाईको गनाउने कमहुन्छ । फिटकरीको एक महीन चूर्ण बनानाले पहिला फिडकिरीको कही मात्र पानी हाल्नु पर्छ । यस पछि नुहाउनाले तपाईको यि समस्य समाधान हुनेछ ।
३. दाँतको समस्य समाधान
फिटकरीमा एंटी९बैक्टीरियल गुण हुन्छ । दांतमा दुखाई वा मुख गनाउने समस्य समाधान गर्नको लागि तपाइ फिटकरीको सहायता लिन सक्नुहुने छ । यो एक नेचुरल माउथवॉश हो । दांत दुखाई भएमा पनि फिटकरीको पानीमा मिसाई कुल्ला गर्नले फाइदा हुनेछ ।
४. दम, खोकीको समस्याको समाधान
५. यूरीन इंफेक्शन हुने समस्य
यूरीन इंफेक्शन भयो भने पनि फिटकरीको प्रयोग गरेर धेरै फाइदा मिल्ने छ । प्रतिदिन फिटकरीको पानीमा प्राइवेट पार्टको सफाई गर्नाले इंफेक्शन को खतरावाट बच्न सकिन्छ । यसको अलावा पानीमा घुलनशील अशुद्धिको कम गर्नको लागि पनिफिटकरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
फिटकिरीले पानीमात्र सफा गर्दैन । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि यसको धेरै फाइदाहरु रहेका छन् ।
यसले कपाल झर्ने समस्या रोक्छ भने यसमा रहेको म्यागनेसियम सल्फेटले मानव कोषलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।